ရောင်းဝယ်သူတိုင်းအတွက် အရေးကြီး မေးခွန်းများ
အနိုင်ရစေမည့် အရောင်းအဝယ်များဆီ ဦးတည်စေမည့် မေးခွန်းများ
လူတစ်ဦး ဈေးကွက်တစ်ခုထဲဝင်လာသောအခါ၊ သူ/သူမမှာ မေးခွန်းပေါင်းများစွာရှိပါတယ်: အရောင်းအဝယ် ဘယ်လိုစတင်မလဲ၊ အကောင့်တစ်ခု ဘယ်လိုဖွင့်မလဲ၊ ဘယ်ဗျူဟာကို ရွေးရမလဲ၊ ဘယ်အညွှန်းကိန်းတွေကို သုံးရမလဲ နှင့်များစွာ။ သင့်မှာလဲ တူညီတဲ့မေးခွန်းများရှိခဲ့ (သို့) ရှိနေတုန်းပဲဆိုတာ သေချာပါတယ်။ လူသစ်ရောင်းဝယ်သူများအတွက် အခြေခံအချက်အလက်များကို ဒီမှာ ရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သင်ဟာဘယ်လို ရောင်းဝယ်သူမျိုးလဲ၊ ဘယ်အချိန်အပိုင်းအခြားက သင်နဲ့ပိုသင့်တော်လဲ၊ ဘယ်ဈေးကွက်က သင့်အတွက် အတော်လဲဆိုတဲ့ အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းမျိုးတွေကို တွေးဖူးပါသလား။ မတွေးဖူးဘူး? ဒါတွေဟာ သင့်ကိုယ်သင်မေးပြီး၊ အဖြေရှာသင့်တဲ့ ပထမဆုံးမေးခွန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အရောင်းအဝယ် အရည်အသွေး၊ သင့်အမူအကျင့်၊ နှင့် သင့်အရောင်းအဝယ်စတိုင်အကြောင်း သေချာတဲ့စိတ်ကူးမရှိတဲ့အတွက် အရှုံးတွေရင်ဆိုင်ရနိုင်ကြောင်း မတွေးမိဘူးလား?
သင်နှစ်သက်သလို ရောင်းဝယ်နိုင်အောင် သင့်ဘာသာ ဖြေကြည့်သင့်တဲ့ အရေးကြီးမေးခွန်း ၄ခုကို မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
1. ၁။ ငါဟာ ဘယ်လိုရောင်းဝယ်သူမျိုးလဲ?
ဒီမေးခွန်းဖြေရာမှာ၊ သင့်ကိုယ်ပိုင် အရည်အသွေးကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။
သင်ဟာ စည်းမျဉ်းတွေကို လိုက်နာလေ့ရှိတယ်ဆိုရင်၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိအားနှင့် မကိုင်တွယ်နိုင်ဘူး အလိုလိုသိစိတ်ပေါ်လည်း မမှီခိုဘူးဆိုရင်၊ သင်ဟာ စနစ်တကျ ရောင်းဝယ်သူတစ်ဦးပါ။
စနစ် အရောင်းအဝယ်ဆိုသည်မှာ စည်းမျဉ်း-အခြေခံ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည်။ ဒီလိုရောင်းဝယ်သူမှာ တိကျတဲ့ဗျူဟာတစ်ခု ရှိပါတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ဆုံသည့်အခါ၊ အရောင်းအဝယ်တစ်ခုဖွင့်ရန် အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရောင်းဝယ်သူသည် ဈေးကွက်စိတ်ခံစားချက်တစ်ခု (သို့) ဈေးကွက်ရှိ လက်ရှိအခြေအနေကို ထည့်သွင်းမစဉ်းစားပါဘူး။ စနစ်မှ ဝယ်ရန်အချက်ပြချက်တစ်ခု ပေးပါက၊ သူ/သူမသည် သံသယမရှိဘဲ ဝယ်ပါလိမ့်မည်။
စနစ်ရောင်းဝယ်သူတစ်ဦး ဖြစ်ရခြင်း၏ အဓိက အကျိုးကျေးဇူးမှာ စခရင်ရှေ့မှာ အချိန်ဖြုန်းမှုနည်းပါးခြင်းဖြစ်သည်။ သင့်အတွက် ဖွင့်ပေး၊ ပိတ်ပေးမည့် အလိုလျောက်စနစ်တစ်ခုကိုတောင် ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။ သင်လုပ်ရမှာကတော့ သင့်အရောင်းအဝယ်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို သတ်မှတ်ရန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖြည့်စွက်ရသော်၊ ဒီလိုစနစ်က သင့်စိတ်ခံစားချက်ပါဝင်မှုကို လျှော့ချပေးပြီး၊ သင့်အတွက် အရောင်းအဝယ်ကို ဖိစီးမှုနည်းစေပါတယ်။
သို့သော်လည်း၊ အားနည်းချက်တစ်ခုကို ဖုံးကွယ်ထားပါတယ်။ စနစ် ရောင်းဝယ်သူရော၊ စနစ်ရော ဈေးကွက်စိတ်ခံစားမှုကို မတုန့်ပြန်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အရေးပါသော သတင်းသည် ကြီးမားသည်ဈေးကွက်လှုပ်ခတ်မှုကို ဖြစ်စေပြီး၊ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ဗျူဟာကအလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။
အလိုလိုသိမှုအပေါ်မှာ မှီခိုပါက၊ လက်ရှိအခြေအနေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် ပိုအားသန်ပါက၊ ဈေးကွက်အပြောင်းအလဲများကို အလွယ်တကူအသားကျပါက၊ အခြားရောင်းဝယ်သူအမျိုးအစား- တစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ပြီးရောင်းဝယ်သူမျိုးဖြစ်ပါသည်။
တစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ပြီးရောင်းဝယ်သူသည် ဆုံးဖြတ်ချက်-အခြေခံသည့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည်။ တစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ပြီးရောင်းဝယ်သူမှာ အရောင်းအဝယ်ဗျူဟာတစ်ခုလည်းရှိပါတယ်။ မတူတာကတော့ သူ/သူမသည် ဈေးကွက်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ဗျူဟာကို အသုံးချခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ အရေးပါမှုအားလုံးဆုံတာကို မြင်တာတောင်မှ၊ ဈေးကွက်လှုပ်ရှားမှုကို သက်ရောက်စေမည့် အကြောင်းများရှိနေပါက၊ အရောင်းအဝယ်ကို ချိန်ဆရန် (သို့) ဈေးကွက်ကနေ ဖယ်နေတာမျိုးတောင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ပြီးရောင်းဝယ်သူဖြစ်ရခြင်း၏ အဓိက အားသာချက်ကတော့ အလိုက်အထိုက်နေတတ်မှုပါပဲ။ သူ/သူမသည် ဈေးကွက်စိတ်ခံစားမှုကို လိုက်နာပါသည်။ သို့သော်၊ သင်သည် ဆုံးဖြတ်ပြီးသောအခါ မပြောင်းလဲဘဲ၊ ဒုတိယအကြိမ်-ခန့်မှန်းတာမျိုးထပ်မလုပ်ဘူးဆိုတာ သေချာရပါမည်။ သင့်ကိုယ်သင် ယုံကြည်မှုရှိပါက၊ သင်ဟာတစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ပြီး ရောင်းဝယ်သူဖြစ်ပါသည်။
2. ဘယ်အချိန်အပိုင်းအခြားက ငါနဲ့သင့်တော်မလဲ?
ရောင်းဝယ်သူတော်တော်များများက အရောင်းအဝယ်အတွက် ဘယ်အချိန်အပိုင်းအခြားက ပိုကောင်းမလဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ကို မေးပါတယ်။ သို့သော် လူတိုင်းအတွက် ဘုံအဖြေတော့မရှိပါဘူး။
သင့်လူနေမှုဘဝက အဓိကကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေပါတယ်။
သင်သည် ပြောင်းလဲနေသူတစ်ဦးဖြစ်ဦး၊ လှုပ်ရှားမှုများကို နှစ်သက်ပါက၊ M15, M30 နှင့် H1တို့လို့ ကာလတိုမှာ ရောင်းဝယ်သင့်ပါတယ်။ အမြတ် မြန်မြန်ရမှာဖြစ်ပြီး၊ အန္တရာယ်ကိုလည်း အမှတ်ရသင့်ပါတယ်။ ကြီးမားသော အပြောင်းအလဲပမာဏနှင့် ငွေ့လျော့ပါးလာမှုနဲ့ ဆက်နွယ်ရနိုင်ပါတယ်။ ကြာရှည်သည့်အချိန်များမှာ ရောင်းဝယ်စဉ်၊ အပြောင်းအလဲအချို့သည် အရေးမပါဘဲ၊ တိုတောင်းတဲ့အချိန်များမှာဆိုရင်တော့ အရေးပါပါတယ်။ ငွေမြန်မြန်ရရန် ဖိစီးမှုအတွက် အသင့်ဖြစ်ပါက၊ တိုတောင်းသည့်အချိန်များသည် သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။
သို့သော်၊ ဖိစီးတာကို မကြိုက်ဘဲ၊ သင့်စိတ်ကူးများကို တွေးတောပြီး၊ သက်သေပြရတာကို ပိုနှစ်သက်ပါက၊ ပိုကြာတဲ့အချိန်များက သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။ ဒီမှာတော့ အားနည်းချက်ကို အမှတ်ရသင့်ပါတယ်။ ဖိစီးမှုအဆင့်ကို လျှော့ချမှာဖြစ်ပြီး၊ ဈေးကွက်က သင့်ပစ်မှတ်ကိုမထိမခြင်း ပိုကြာတဲ့အချိန်ကို စောင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်က စိတ်ရှည်တဲ့သူလား? ဒါဆိုရင်၊ နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ်နှင့် လစဉ် အချိန်ကာလများကို ရွေးပါ။
3. ဘယ်ဈေးကွက်က ငါ့ကိုပိုများတဲ့ အမြတ်ပေးမလဲ?
တစ်ခါတစ်ရံမှာ ရောင်းဝယ်သူများတောင်မှ ဘယ်ဈေးကွက်က သူတို့ကို ပိုကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးပေးမလဲဆိုတာ မသိကြပါဘူး။ ဈေးကွက်လှုပ်ခတ်မှုအားဖြင့် ဈေးကွက်တွေခွဲခြားထားကြောင်း သိပါသလား? ရေရှည် ဈေးလမ်းကြောင်းမှာ ရောင်းဝယ်နိုင်တဲ့ ဈေးကွက်တွေရှိသလို၊ ရေတိုအဟုန်မှာ အမြတ်ရရန် ပိုဖမ်းထားသင့်သည့် ဈေးကွက်များလည်းရှိတယ်ဆိုတာ သိပါသလား?
လူကြိုက်အများဆုံးအတွဲဆိုပြီး ကြားထားတဲ့အပြင်၊ ခိုင်မာတဲ့အမြတ်ပေးနိုင်မည်ဟု သေချာသည့်အတွက် EUR/USD ကိုသာရောင်းဝယ်ပါက၊ သင်အရူးလုပ်ခံရနိုင်ပါတယ်။
EUR/USD ကိုရောင်းဝယ်ရင်း အမြတ်ကြီးရပါက၊ အဆင်ပြေပါတယ်၊ ဘာမှမပြောင်းပါနဲ့။ သို့သော်၊ သင်ရှုံးသါားပါက၊ အခြားဈေးကွက်ကို စဉ်းစားရမည့်အချိန်ပါပဲ။ ဈေးကွက်လှုပ်ခတ်မှုကြီးနဲ့ ရေနံသည် သင့်အောင်မြင်မှုဖြစ်နိုင်ပါတယ် (သို့) ရေရှည် ဈေးလမ်းကြောင်း နှင့် AUD/JPY သည် သင့်အခွင့်အရေးဖြစ်နိုင်သည်။ FBSမှ ထောက်ပံ့ပေးထားသည့် အရောင်းအဝယ် အတွဲများ ကို ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။
4. ဘယ်လိုသုံးသပ်မှုမျိုးက ပိုပြီးယုံကြည်အားထားရတဲ့ အချက်အလက်ကို ပေးမှာလဲ?
သင့်အား အမြတ်ရစေမည့် အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နိုင်စေရန် ကူညီပေးမည့် ကြီးမားသည့် အချက်အလက်ပမာဏကို ဈေးကွက်မှ ကမ်းလှမ်းပေးပါတယ်။ အားလုံးကို အမိဖမ်းဖို့တော့ ရှုပ်ထွေးပါလိမ့်မည်... ဟုတ်ချင်မှလဲ ဟုတ်မှာပါ?
ဒီမှာလဲ သင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကသာ အဓိကကဏ္ဍမှပါဝင်ပြန်ပါတယ်။
သတင်းများဖတ်ခြင်းနှင့် စီးပွားရေးဒေတာများ စစ်ဆေးရတာကို ပိုပြီးသက်သောင့်သက်သာရှိတယ်လို့ ခံစားရပါသလား? အခြေခံသုံးသပ်ချက်သည် သင့်အတွက် ဖြစ်ပါသည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာ အတွဲများကို ယုံကြည်သလား၊ နည်းပညာဆိုင်ရာ အညွန်းကိန်းများသည် ပိုပြီးစိတ်ချရတယ်လို့ ထင်ပါသလား? နည်းပညာသုံးသပ်ချက်သည် သင့်အတွက် ဖြစ်ပါသည်။
သင်သည် ကြီးမားတဲ့ အချက်အလက်ပမာဏကို သုံးသပ်နိုင်တာ သေချာပါသလား? ဟုတ်ကဲ့လို့ သင်ဖြေမည်ဆိုပါက၊ သုံးသပ်မှုနှစ်ခုစလုံးကို သင်သုံးနိုင်ပါတယ်။ အချက်အလက် ပမာဏ အပြည့်အဝကို ခြုံငုံနိုင်ပြီး၊ မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ကြောင်း သေချာပါစေ။
မသေချာသေးပါက၊ >ဈေးကွက် သုံးသပ်ချက် ကို ဆန်းစစ်ကြည့်ပြီး၊ သင့်အတွက် ဘာက ပိုသင့်တော်မလဲဆိုတာ ရှာကြည့်ပါ။
ဒီမေးခွန်းတွေအားလုံးကို ဖြေပြီးပါပြီလား? ဖြေပြီးပါက၊ သင့်အရောင်းအဝယ် အရည်အသွေးကို ရှာတွေ့ပြီလားဆိုတာ ဆန်းစစ်ရမည့်အချိန်ပါပဲ။